IBhayibhile: Kutheni Umele Ube Nomdla EBhayibhileni?
IBhayibhile yeyona ncwadi ixhaphakileyo ehlabathini. Kutheni sisitsho nje? Kulula ukuyiqonda. Ineengxelo zobomi babantu bokwenene nendlela ababesebenzisana ngayo noThixo. Ezi ngxelo zisifundisa ngamazwi alula nangqalileyo anokuguqulelwa ngeelwimi ezininzi aze aqondwe ngabantu beendawo zonke. Imigaqo yeBhayibhile isoloko isebenza.
Eyona nto ibalulekileyo kukuba iBhayibhile ithi asiyoncwadi nje ethetha ngoThixo kodwa ­ivela kuye. Ichaza igama likaThixo, ubuntu bakhe nokuba injongo awayenayo xa wayedala umhlaba nabantu ayitshintshi. Kwakhona ithetha ngebali lakudala lomlo phakathi kokulungileyo nokubi: ibali lendalo iphela eliya kuba nesiphelo esihle. Ukuba ufunda iBhayibhile ngaphandle kokugxeka, uya kukholelwa kuyo uze ube nethemba.
IBhayibhile inenkcazelo ongasoze uyifumane naphi na. Ngokomzekelo, isixelela inyaniso ngemibandela efana nale:
Sivela phi yaye kutheni sisezintlungwini kangaka
Ilungiselelo likaThixo lokukhulula uluntu
Oko uYesu asenzele kona
Ikamva lomhlaba nabantu
Kutheni ungakhe ufunde la maphepha alandelayo uze uve ukuba yintoni ngokwenene ethetha ngayo iBhayibhile?
Umxholo: Indlela uBukumkani bukaThixo obuya kububuyisela ngayo ubulungisa noxolo emhlabeni
Iziqulatho: Iincwadi eziyi-39 zesi­Hebhere (neendinyana ezimbalwa zesiAramiki) kunye neziyi-27 zesiGrike
Ukubhalwa kwayo: Ngabantu abayi-40 abayibhala kwiminyaka engaphezu kwemalunga neyi-1 600, ukususela ngo-1513 ukusa malunga nonyaka ka-98
Ulwimi: Ngoku iguqulelwe iyonke okanye ngokuyinxenye, ngeelwimi ­ezingaphezu kwe-2 500